शरीर फिट राख्नुस्, लामो आयु बाँच्नुस् | National Cardiac Centre : Best Heart Clinic in Kathmandu, Nepal
चाल्र्स डार्विनले ‘फिटनेस’लाई प्रजनन र ‘नेचुरल सेलेक्सन’ सँग जोडेका थिए भने स्पेन्सरले ‘इकोनोमिक थ्योरी’सँग दाँजेका थिए ।
१५० वर्षपछि पनि यो धारणा मानवजीवनसँग उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ । यो उखान दुई अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ ।
पहिलो, जुन व्यक्तिको शरीर स्वस्थ, तन्दुरुस्त र सक्रिय हुन्छ अर्थात ‘फिजिकल्ली फिट’ हुन्छ, त्यो व्यक्ति लामो समयसम्म बाँच्छ ।
दोस्रो, जुन व्यक्तिले वातावरण र परिस्थितिअनुसार आफूमा सकारात्मक परिवर्तन गर्दै जान्छ, उसले लामो समयसम्म जीवित रहने मौका पाउँछ ।
उमेर बढ्ने क्रममा विभिन्न रोगहरू र यसका जोखिमहरू थपिँदै जाने भएकाले जीवनशैलीलाई दिनहुँ सुधार गर्दै गएमा र आफूलाई निरन्तर शारीरिक रूपमा सक्रिय राख्नसकेमा रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ । जीवन स्वस्थ हुनसक्छ ।
अर्थात शारीरिक रूपमा आफूलाई फिट बनाउनु बाँच्नका लागि सर्वोत्तम परिवर्तन हुनसक्छ ।
व्यायामले रक्तसञ्चार बढाएर शरीरका तन्तु र कोशिकाहरूमा अक्सिजनको आपूर्ति र उपयोग समेतमा सुधार ल्याउँछ ।
शरीरलाई स्वस्थ राख्न अक्सिजनको प्रवाह र प्रयोग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले नै शारीरिक गतिविधि स्वस्थ जीवनका लागि अति महत्त्वपूर्ण कार्य मानिन्छ ।
नियमित शारीरिक गतिविधिले तौल घटाउन तथा नियन्त्रणमा राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ । हप्तामा १५० मिनेटभन्दा बढी शारीरिक गतिविधिमा सक्रिय भएमा मुटु र रक्तनलीका रोगहरू (ह्दयाघात/मस्तिष्क घात) को सम्भावना घट्छ ।
मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्टोरेल जस्ता रोगहरू लाग्नबाट बच्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।
मधुमेहको बिरामीमा इन्सुलिनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाएर सुगर नियन्त्रणमा मद्दत पुर्‍याउँछ । नियमित व्यायामले रक्तचापलाई घटाउँछ भने उच्च रक्तचापका औषधीहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउँछ ।
उच्च रक्तचाप हुन नदिन, रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्न र औषधीको प्रयोगलाई न्युन गर्न पर्याप्त (१ घन्टाभन्दा बढी) शारीरिक गतिविधि गर्नु सर्वोत्तम उपाय मानिन्छ ।
व्यायामले रगतमा पाइने राम्रो कोलेस्टोरेल (एच.डी.एल.) को स्तरलाई बढाउँछ, नराम्रो कोलेस्टोरेल (एल.डी.एल.) र ट्राइग्लिसेराइडलाई घटाएर मुटुरोग (ह्दयाघात) को जोखिमलाई घटाउँछ ।
आन्द्रा र स्तनको क्यान्सरको जोखिम निष्क्रिय व्यक्तिभन्दा कम हुन्छ भने पाठेघर र फोक्सोको क्यान्सरको सम्भावना पनि नियमित व्यायामले घटाउन सक्छ ।
शारीरिक गतिविधि र व्यायामले मांसपेशी र हाडलाई बलियो र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । उमेर बढ्दै जाँदा हड्डीमा हुने कमीलाई पनि व्यायामले सन्तुलनमा राख्छ ।
नियमित व्यायाममा संलग्न हुनेहरूको हिपको फ्याक्चर, जोर्नी र जोर्नीको शोथसम्बन्धी समस्यामा पनि कम हुन्छ ।
सोच्ने, सिक्ने र निर्णय गर्ने अति आवश्यक सीपहरू जुन उमेरसँग घट्ने गर्छ, व्यायामले यसलाई सन्तुलनमा राख्छ ।
नियमित शारीरिक गतिविधिले मस्तिष्कमा इन्डोर्फिन र मिलाटोनिन जस्ता महत्त्वपूर्ण हर्मोन, रसायनको उत्पादन र क्रियामा समन्वय ल्याउँछ ।
पहिलादेखि शारीरिक रूपले सक्रिय नहुनेहरूले केही कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । यस्ता व्यक्तिले एकाएक आफूलाई सक्रिय बनाउन खोज्दा मुटुसम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ।
त्यसैले ४५ वर्षभन्दा माथि उमेर भएका र मुटुरोगका कम्तीमा २ वटा जोखिमहरू भएका व्यक्तिले वा मुटुरोगीले आफ्नो चिकित्सकको परामर्श लिन जरुरी हुन्छ ।
यस्ता व्यक्तिले शारीरिक गतिविधि गर्ने समय, अवधि, प्रकार, गति, दूरी आदिबारे चिकित्सकसँग सल्लाह गर्न जरुरी हुन्छ । स्वस्थ व्यक्तिले पनि एकाएक आफ्नो गतिविधिको गति, समय वा दूरी बढाउनु हुँदैन ।
यसलाई क्रमश: आफ्नो शरीरको आवश्यकता र क्षमतालाई विचार गर्दै बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
अचानक धेरै व्यायाम गरेमा हृदयाघातको सम्भावना हुन्छ । व्यायामको बेलामा छाती दुखेमा वा असहज रूपमा स्वाँस्वाँ भएमा, मुटु ढुकढुक भएमा,
चाल अनियमित भएमा, रिङ्गटा लागेमा विश्राम गरेर चिकित्सकको सम्पर्कमा जानु राम्रो हुन्छ ।
दीर्घरोगीहरू, वृद्धहरू र हाडजोर्नी समस्याले प्रभावितहरूलाई नियमित शारीरिक गतिविधि गर्न असहज हुनेहुँदा चिकित्सकको सल्लाह लिएर शरीरले भ्याएसम्म प्रतिदिन शारीरिक गतिविधिमा संलग्न हुनु जरुरी हुन्छ ।
मध्यम व्यायाम भन्नाले छिटोछिटो अलिअलि स्वाँस्वाँ हुनेगरी वा हल्का पसिना आउनेगरी हिँड्नु वा आधा घन्टामा ३ किमिजति हिँड्नु हो ।
आफूलाई सुहाउँदो र मनपर्ने जुनसुकै गतिविधि गर्न मिल्छ, जस्तै- दौडिने, पौडी खेल्ने, साइकल चलाउने, ट्रेडमिलमा हिँड्ने, व्याडमिन्टन, फुटबल, टेनिस आदि खेल्ने । आफ्नो क्षमताभन्दा बढी गरेको व्यायामले हानि गर्न सक्छ ।
मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्टोरेल, मोटोपना, धूमपानजस्तै अकर्मन्य जीवनशैली पनि ह्दयाघात, मस्तिष्क घातको प्रमुख कारणहरूमध्ये एक हो ।
त्यसैले रोगलाई नियन्त्रण गर्न वा रोग लाग्न नदिन प्रत्येक दिन आफूलाई शारीरिक रूपमा सक्रिय राख्न जरुरी हुन्छ ।
एकै ठाउँमा धेरै बेर नबसेर बीच-बीचमा हिँड्डुल गर्नु, टिभी लामो समयसम्म नहेर्नु वा हेर्ने बेलामा कुनै व्यायाम गर्नु, अफिसमा सकेसम्म भर्‍याङको प्रयोग गर्नु,
नजिकका ठाउँहरूमा पुग्न गाडीको प्रयोग नगर्नु, मोबाइलमा कुरा गर्दा सकेसम्म हिँड्दै कुरा गर्नु, कुनै कारणले कुनै ठाउँमा कुर्नुपर्ने भएमा हिँडेर समय बिताउनु, पार्टी, पिकनिकमा पनि हिँड्ने वातावरण बनाउनु,
बालबालिका र गृहिणीलाई दैनिक हिँड्न प्रेरित गर्नु र सकेसम्म सँगै लानु, भोजभतेर पछिको समयमा अतिरिक्त हिँडेर तौल बढ्न नदिनु आदि ससाना परिवर्तनले हाम्रो स्वास्थ्यलाई अमूल्य लाभ दिनसक्छ ।
आजैदेखि परिवर्तनको सुरुवात गरौं । जो बढी फिट हुन्छ, ऊ त्यति नै स्वस्थ र दीर्घजीवी हुन्छ ।